ကဏ္ဍစုံ ပြခန်း: ဟာသကမ္ဘာ
ညချစ်သူ | 12:46 AM | ဟာသ
ညချစ်သူ | 12:46 AM |
လူတစ်ယောက်သည် ဟိုတယ်တစ်ခုတွင် Check-in ၀င်ပြီးသသည့်နောက် သူနေရမည့်
အခန်းသို့ ၀င်သွားသည်။ အခန်းထဲတွင် ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကို တွေ့သော အခါ
၀မ်းသာအားရ သူ၏ ဇနီးသည် ထံသို့ email တစ်စောင် ပို့လိုက်သည်။ ဒါပေမယ့်
email မှာ လိပ်စာမှားသွားသည်ကို သတိမထားမိလိုက်ချေ။
မြို့တစ်မြို့၏ နေအိမ်တစ်ခုတွင် လင်ယောက်ျားဆုံးသွား သဖြင့် ပူဆွေးနေသော
မုဆိုးမ တစ်ယောက် email စစ်နေသည်။ ခဏနေတော့ သူမ၏ သား အခန်းထဲ ၀င်လာရော
email ဖတ်ရင်း လဲကျနေသော သူ၏ မိခင်ကို တွေ့ရလေသည်။
အမေဖွင့်ထားသော email မှာ
နေ့စွဲ။ ၅ သြဂုတ် ၂၀၀၈
အချစ်ကလေးရေ။ မောင့်စာကို ဖတ်လိုက်ရလို့ အံ့သြသွားလား။ သူတို့ မောင့်ကို
ကွန်ပြူတာ ပေးသုံးပြီး ချစ်တဲ့သူတွေဆီ email ပေးပို့တယ်။ မောင်အခုပဲ
ဒီကို ရောက်ပြီး Check-In လုပ်လိုက်တယ်။ မနက်ဖြန်ရောက်လာမဲ့
အချစ်လေးအတွက် သူတို့ သေချာ ပြင်ဆင်ထားတာ တွေ့တယ်။
ငါ ကျောင်းဆရာမကို.. လက်ထက်ခဲ့မိတာ... မှားသွားပြီကွာ.. တဲ့..
ဘာလို့လဲ တဲ့.. သူ့သူငယ်ချင်းက.. မေးတယ်... တဲ့..
အေးကွာ... ဟိုနေ့က ငါအိမ်ပြန်နောက်ကျတော့..
နောက်တစ်ခါ.. အိမ်ကို အချိန်မှန် ပြန်လာပါ့မယ်... နောက်မကျစေရပါဘူး.. လို့..
အကြောင်း တစ်ရာ ရေးခိုင်းတယ်ကွာ...
အိမ်ရှင်၏သမီးသည် စန္ဒရားကို တီနေသည်။
၎င်းအနားသို့ ဧည့်သည်ဖြစ်သူ နာမည်ကြီးစန္ဒရားဆရာ ကပ်လာပြီး မေးသည်။
မလိုအပ်သည်များကို မရေးသင့်ကြောင်း ကျောင်းသားကြီးများက တွမ်
အချိန်အနည်းငယ်အကြာတွင် တွမ်.. ထံမှ ပထမဆုံးစာကို တွမ်၏ မိဘများ လက်ခံရရှိကြသည်။
၃၈၇ ယောက်ရှိပါသည်။ ကျောင်းသားဦးရေ ၃၈၆ ယောက်သာဖြစ်စေလိုသော ဆန္ဒ
နောက်ဆုံး ဆန်ခါတင် အနေနဲ့ ယောင်္ကျား ၂ ယောက်နဲ့ မိန်းမ ၁ ယောက်
ဒုတိယ တစ်ယောက်ကလဲ ဒီလိုပဲ ကိုယ့်မိန်းမတော့ ကိုယ် မသတ်နိုင်ပါဘူးလို့ပဲ
အဲဒါနဲ့ နောက်ဆုံး အမျိုးသမီး အလှည့်ရောက်လာတာပေါ့
ရှင်တို့က ဗလာကျည်ဆန်တွေ ဘာလို့ထည့်ထားတာလဲ .. အမလေး မနဲကို ရိုက်သတ်ခဲ့ရတယ်
"အင်မတန်တိတ်ဆိတ်တာပေ့ါ.. ဒီနှစ်ထဲမှာ အိမ်ငါးအိမ် အနုကြမ်းစီးခံရတယ်..
ဘေးတွေလှဲနေသော ယောက်ျားကလည်း သူ့အတွေးနှင့်သူဖြစ်သည်။
မိန်းမလုပ်သူက ယောင်္ကျားရဲ့ပါးကို ဖြန်းခနဲ ပိတ်ရိုက်လိုက်တယ်..။
ရှင့်အကျီင်္အိတ်ကပ်ထဲမှာ ကေသီ ဆိုတဲ့ မိန်းမနာမည်ကိုတွေ့လို့ လို့
ညက ရှင့် မြင်းမ ဖုန်းဆက်လို့
ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်မြို့တော် တဘီစီမြို့တွင်းသို့ ရုရားတစ်ယောက်
"ခင်ဗျား သတ်မှတ်မိုင်နှုန်းထက် ပိုပြီး မောင်းလားတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ
ဂျော်ဂျီယာဘာသာနဲ့ ရှင်းလင်းချက် ရေးပါ။"
"ကျွန်တော် ဂျော်ဂျီယာစာမှ နားမလည်ဘဲ။။ ဘယ်လိုလုပ် ရေးရမှာလဲ"
"ဆင်ခြေမပေးနဲ့၊ ဂျော်ဂျီယာဘာသာနဲ့ ရှင်းလင်းချက်ရေး.. ဒါပဲ"
မည်သို့မှ ရှင်းပြလို့လည်းမရ.. ဂျော်ဂျီယာ ယာဉ်ထိန်းရဲသည် အင်မတန်မှ ခေါင်းမာလှသည်။
နောက်ဆုံးတွေင် ရုရှားသည် စာရွက်တစ်ရွက်ကို ထုတ်ပြီး ဒေါ်လာ
ထို့နောက် ယာဉ်ထိန်းရဲကို ကမ်းပေးသည်။
ငွေစက္ကူကို တွေ့သောအခါ ကားဆရာကို ပြောသည်။
"ဂျော်ဂျီယာလို မတတ်ဘူးလို့ ဘာဖြစ်လို့ ပြောလဲ.. အခု
တစ်ဝက်တောင်ရေးပြီးပြီပဲ... ဆက်ရေး... "
ထည့်ချုပ်ထားသည်။ ဤအချက်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မိမိကိုယ်မိမိ သတ်သေသည့်
နေရာတကာ စွာကျယ်ကျယ် ၀င်လုပ်နေသည့် ယောက္ခမကို ကိုဘမောင်
သည်းမခံနိုင်တော့သဖြင့် တစ်နေ့တွင် ယောက္ခမ၏ ခြေထောက်နှစ်ဖကို ဆွဲကိုင်ကာ
ခေါင်းအောက်စိုက် ဖြစ်နေသော ယောက္ခမနှင့် ကိုဘမောင်
စိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူ.. ဒါကြောင့် အန်တီ့ကို ကျွန်တော် လွှတ်ပေးလိုက်မယ်..
- တော်သေးတာပေါ့ ... တခြား သုံးယောက်ကို မေးမသွားလို့
ပထမဦးဆုံး အပျံစားကုတ်အင်္ကျီ အပျံစားဘောင်းဘီဝတ်ထားသော လူချောတစ်ယောက်
ထွက်လာပြီး ပစ်သည်။ မြားသည် ဘုရင့်အပါးတော်မြဲ၏ ခေါင်းထိပ်တွင် တင်ထားသော
ကုတ်အင်္ကျီနှင့် ဘောင်းဘီတိုကို ၀တ်ထားသည်။ ကြီးမားလှသော လေးကို
ယူလိုက်ပြီး ချွန်ထက်သည့် စို့ချောင်းဖြစ်ပစ်စည်။ စို့ချောင်းသည်
ဘုရင့်အပါးတော်မြဲ၏ ခေါင်းကို ဖြတ်ဖောက်ထွက်သွားသည်။
တစ်ခါက မြွေ၊ ပုရွက်ဆိတ်၊ ပင့်ကူနဲ့ ကင်းခြေများတို့ဟာ ဖဲအတူရိုက်ကြသတဲ့။
ဖဲရိုက်ရင်း တအောင့်ကြာတော့ ဆေးလိပ်ကုန်သွားလို့ သွားဝယ်ဖို့
မြွေ...... ငါ့မှာ ခြေမရှိဘူး။ ပုရွတ်ဆိတ်ကို သွားဝယ်ခိုင်းလိုက်
ပုရွတ်ဆိတ်...... ပင့်ကူမှာ ခြေ၈ချောင်းရှိတယ်။ ငါ့ထက်များတယ်..
ပင့်ကူ..... ငါ့မှာ ခြေများတယ်ဆိုပေမယ့် အကိုကြီးကင်းလောက်တော့ မများဘူး။
တစ်ယောက်တစ်ပေါက် ပြောဆိုကြတော့ ကင်းခြေက စိတ်မသက်မသာနဲ့....
"မတတ်နိုင်ဘူး။ ငါက ခြေထောက်ပိုများတော့ ငါပဲသွားပါ့မယ်ကွာ... " ဆိုပြီး
ကျန်တဲ့အကောင်တွေက စောင့်ရင်း တစ်နာရီကြာတဲ့အထိ ကင်းက ပြန်မလာသေးဘူး။
ဆက်စောင့်ကြရင်း နှစ်နာရီကြာတဲ့အထိ ပြန်မလာတော့ ကျန်အကောင်တွေက
စိတ်ပူပြီး ပင့်ကူကို လိုက်ကြည့်ခိုင်းလိုက်တယ်။ လိုက်ကြည့်ဖို့
ပင့်ကူတံခါးဖွင့်လိုက်တော့ တံခါးဝမှာ ထိုင်နေတဲ့ ကင်းခြေကို
"မင်း ကြာလှချည်လား? "အားလုံး မင်းကို စောင့်နေတာ မင်းက
ဒီမှာဘာထိုင်လုပ်နေတာလဲ" လို့ အော်တော့
"ဆေးလိပ်သွားဝယ်ဖို့ ငါဖိနပ်စီးနေတာ မပြီးသေးဘူးကွ"
အမျိုးသမီးတစ်ယောက်သည် ဆရာဝန်ထံသို အော်ဟစ်ရောက် လာ
ပြိး .. ဆရာဆရာ ကူပါအုံး ကျွန်မယောင်္ကျား ကြွက်တစ်ကောင်မြိုချမိ
ပြောလိုက်သည်။ ငါးမိနစ်လောက်ကြာမှဆရာဝန်ရောက်လာ သည်။
ထိုလူ၏ပါးစပ်နားတွင် ငါးသလောက်ခြောက် တစ်ကောင် ကိုဝေ့ယန်း
နေလေသည်။ ခင်ဗျားရူးနေလား ခင်ဗျားကိုကျုပ်ဒိန်ခဲပြပါဆိုနေ...
ကျွန်မသိပါတယ်ဆရာရယ်ဒါပေမယ့် ကျွန်မကြောင် ကိုအရင်ထုပ်
အမျိုးသမီးမှ မြန်မြန်လုပ်လေ သွားခိုရအောင် ဘာလုပ်နေတာ လဲဟု
အော်ပြောလိုက်သည်။ ငါ့သွားတုမတွေ့လို့ ကွ ဟု အမျိုးသားပြန်အော်
အသားညှပ်ပေါင်မုန့်ကျဲမယ်လို့ရှင်ထင်နေလို့လား ဟုအသံစူုး စူး
ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်းသည် ဖဲချပ်တစ်ထုပ်နှင့် တူသည်။
ခင်ဗျားလိုက်ပိုးပန်းနေစဉ်မှာတော့ Heart ဖဲချပ်ပေါ့။
ခင်ဗျားစေ့စပ်တဲ့အခါမှာတော့ အဲဒါ Diamond ပဲ။
မင်္ဂလာဆောင်ပြိးသွားတဲ့အခါကျရင်တော့ Clubs တွေဖြစ်သွားရော။
အဆုံးမှာတော့ အာလုံး Spades တွေဖြစ်ကုန်တော့တာပဲ။
ဂျိုအန်း...။ ယောက်ကျားတွေ လက်ပတ်နာရီကလွဲပြီး
လမ်းမှာတောင်းစားနေရတယ်လို့..ဟုပြောလိုက်၏။ သူတောင်းစား. က
ဒါပေမယ့် ကျွန်မအဝတ်အစားတွေကိုတော့ နောက်မိန်းမကို
ပေးမဝတ်ပါဘူးလို့ ကတိပေးပါဟူပြောလေသည်။ ယောက်ျားက
စိတ်ချပါ ငါပေးမဝတ်ပါဘူး၊ ပြိးတော့ အဲဒါတွေကလည်း သူနဲ့မတော်ပါ
ခြံထဲရှိသရက်ပင်ပေါ်တွင် သရက်သီးများခိုးနေသော အိမ်ဘေးမှ
ချာတိတ်အား အိမ်ရှင်ကဖမ်းမိသည်။ လာလိုက်ခဲ့မင်းအဖေ
ဆီသွားမယ်။ ကလေးကိုမဆုံးမရကောင်းလားလို့ ငါ သူ့ကို
သွားချဲမယ်၊ တိုးတိုးပြောပါဦးလေးရယ် ဖေဖေကြား သွားပါ့မယ်။
ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားရှာပေးပါ့မယ်။ ဒါနဲ့ခင်ဗျားရဲ့ ယောက်ျား
ကိုတွေ့ရင် ဘာပြောပေးရမလဲ ပြောလိုက်ပါ၊ကျွန်မအမေ
ကျွန်မတို့အိမ်မှာလာနေမယ့် အစီအစဉ်ကို ဖျက်သိမ်း
ပို့စ်မော်ဒန်ဆိုတာဘာလဲဟင်´ စားစရာမရှိရ တဲ့အထဲ
ဆရာမ…ကဲမောင်မြပြောစမ်း.ရှိတ်စပီးယား ဘယ်တုန်းက
Posted by ညချစ်သူ at 12:46 AM